सोमबारदेखि सहुलियत कर्जा कार्यक्रम सुरु, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सुरु गर्‍यो सहुलियत कर्जा, कति छ व्याज ? — SuchanaKendra.Com
सोमबारदेखि सहुलियत कर्जा कार्यक्रम सुरु, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सुरु गर्‍यो सहुलियत कर्जा, कति छ व्याज ?
सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०७५/९/२४ गते
काठमाडौं, । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सोमबारदेखि सहुलियत कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । सरकारी स्वामित्वको यस बैंकले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा भएको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा लैजाने बताएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।